नेपालीको आवाज अनलाईनको रिपोटीङको प्रभाव, ५३ दिन देखि ओमानमा अलपत्र समर किसनको शव नेपाल आयो – Nepaliko Aawaj
नेपालीको आवाज अनलाईनको रिपोटीङको प्रभाव, ५३ दिन देखि ओमानमा अलपत्र समर किसनको शव नेपाल आयो
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र ११, २०७६ | ६:२१:०५
११ भाद्र, काठमाण्डौ
गत असार २० गते सोमबार बिहान १० बजेको एअर अरेबियाको जहाजबाट नेपालबाट साउदी अरबको दमाम जादै गर्दा बाग्लुङ्ग नगरपालिका वडा नं. १० का ३४ वर्षका युवा सम्मर बहादुर किसनको जहाजमानै निधन भयो ।
निधन भएपछि एअर अरेबियाको जहाज ओमानमा ल्याण्ड गरि उनको मृत शरिरलाई त्यहि छोडी आफ्नो गन्तव्यमा उड्यो । तर मृत शरिर त ओमानमा भयो तर उनीसंग हुुनुपर्ने महत्वपुर्ण कागजपत्र पोसपोर्ट त्यहि बाट हराउयो वा गाएव भयो । त्यसैकै कारण उनको मृत शरिर नेपाल ल्याउन समस्या भईरहेको थियो । युनीक ओभरसिजबाट करिब १४०० रियल तलब खाने सहमतीमा उनि दमामको लागि उडेका थिए । मृतक किसनका एक श्रीमती, दुई जना १५ र ३ वर्षका छोरा छन् भने १६ वर्षकी एक छोरी छीन् ।
यहि कुरालाई समेट्दै नेपालीको आवाज अनलाईन पत्रिकाले बाग्लुङ्ग नगरपालिका वडा नं. १०, निफन्नी, लामाथरमा गत श्रावण २७ गते गएर भिडीयो रिपोर्ट तयार पारेको थियो जुन अहिले दुई लाख पन्ध्रहजार भन्दा बढि दर्शकले हेरिसकेका छन् । यहि प्रभावले गर्दा पनि उहालाई ल्याउन सजिलो भएको बताउनु हुन्छ मृतक समर किसनकी दिदी सासु देवि नेपाली ।
करिब ५३ दिन देखि ओमानमा अलपत्र परेको किसनको शव आज (बुधवार) बिहान ९.३० बजेको एयर अरेबियाको जहाजबाट नेपाल आएको र अहिले शव त्रिभुवन अन्तराटिमृतक किसनका जेठान श्याम बि.क.ले जानकारी दिए । शव नेपाल आएपनि केहि महत्वपुर्ण कागजपत्र नआएको देखिएकोले यसको पहल भैरहेको उनले बताए ।
यो घटना गरिबिले पिल्सीएर परिवारको सपना पुरा गर्न जाने अनि अनायसै ज्यान गुमाउनुपर्ने एउटा प्रतिनीधि पात्र मात्र हो । हामी मात्र यति भन्छौ कि समर किसनको परिवारले उचित क्षतिपुर्ती पाउनुपर्छ । साथै मृतक किसन प्रती हार्दीक श्रद्धाञ्जली अनि मृतक परिवार प्रति धैर्यधारण गर्ने क्षमता मिलोस कामना बस कामना ।
साउदी जादा जहाजमानै प्राणत्यागेका सम्मर बहादुर किसन, पासपोर्ट गायब, शरिर ओमानमा अलपत्र
परिवार पाल्ने सपना बोकेर बिदेश जादा जहाजमानै मृत्यु भएका ३४ वर्षीय सम्मर बहादुर किसनको पिडादायक कथा तपाई हामी सबै मिलेर यो भिडीयो शेयर गरौ जसले गर्दा उहांको पार्थीव शरिरलाई नेपाल ल्याउन सकियोस अनि परिवारलाई क्षतिपुर्तीको लागि पहल होस ।बाग्लुङ जिल्ला बा.न.पा.१०, निफन्नी, लामाथर बस्ने ३४ वर्षीय सम्मर बहादुर किसन, परिवारको सपना पुरा गर्न गत असार २० गते नेपालबाट एयर अरेबियाको जहाजबाट साउदी अरेबियाको लागि उडेर बिमानमै निधन भएपछि ओमानमा मृत शरिर पुग्छ तर पासपोट बिचबाटनै गाएब हुन्छ । त्यही कारण अहिले सम्म उहाको मृत शरिर नेपाल ल्याउन संभव भैरहेकोछैन । अहिले परवारमा रुवाबांसी छ । न सास छ, अब न लास छ । साह्रै पिडा दायीकको यो भिडीयो हेर्नुहोस । अरु भिडीयोको लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस । https://youtu.be/drGgpZvPHc0यस्तै भिडीयोको लागि भने हामीलाई लाईक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न भने नभुल्नुहोला ।
Gepostet von Nepalikoaawaj.com-नेपालीको आवाज अनलाईन पत्रिका am Mittwoch, 14. August 2019